U-Apple ufuna ukuba uSiri aphendule kuwe ngokwazi ilizwi lakho | Ndisuka mac
Siyazi ukuba oko wafika, USiri uphucule amanqaku kunye neenkonzo zakhe kancinci kancinci de kube yile nto iyiyo namhlanje, umsebenzi oncedisayo kunye nomncedisi wabucala abaninzi. Ngokucacileyo, uSiri uneempazamo kunye neziphene, kunye neempawu ezisivumela ukuba senze unxibelelwano lwethu nezixhobo zethu lula (ngakumbi kubantu abanengxaki yomzimba njengobumfama).
Emva kokuphuculwa okuqhubekayo, isicelo esitsha selungelo elilodwa lomenzi esichazwe ngu Ngokukhawuleza Apple Isenza sicinge ukuba iApple iyakusondela ekufumaneni uSiri ukuba aqonde kuphela ilizwi lakhe nabani na esimfunayoOko kukuthi, kuthi njengabasebenzisi kunye nabanini becebo, njengomthetho ngokubanzi.
Siyazi ukuba iSiri yenye yeziseko apho uninzi lwezixhobo zenkampani zisekwe. A) Ewe, Siyayibona indlela i-iPhone, i-iPad, iApple Watch, iApple TV, nkqu neCarPlay, kunye nazo zonke iimodeli ezahlukeneyo zeMac, namhlanje ezibandakanya le nto iphambili.
Ipatent iziswe ekukhanyeni, ichaza indlela apho iApple izimisele "ukufundisa" uSiri ukuba liliphi igama lomnini wesixhobo, ukuze usabele kuphela kwelo lizwi xa uliqonda. Ukongeza, igama eliphambili elisetyenzisiweyo linokuba likhethwe ngumsebenzisi, hayi eliqhelekileyo Hayi Siri.
Oku kunokuba yi Ukuqhubela phambili okukhulu kwamabango enkampani yeSiri ukuba, kube kanye, kusetyenziswe ngokubanzi kuzo zonke izixhobo. Okwangoku, uSisi umele ezinye iziphene kwezokhuseleko kuba nabani na angakunika izikhokelo ezinje "Yekabani le iPhone?" okanye "Khanyisa izibane zendlu (usebenzisa iHomekit)", nokuba ungumnikazi wesixhobo esisetyenzisiweyo. Kwimeko yobusela, ukhuseleko lwethu lwaluya kuba sengozini.
Njengawo onke amalungelo awodwa omenzi wechiza, asazi ukuba iApple isondele ekumiliseleni kwitekhnoloji yayo yangoku, okanye ukuba injalo nje, lilungelo elilodwa lomenzi wechiza. Nangona kunjalo, ukuphucula inkonzo ebonelelwa ngumncedisi wenkampani oyithandayo, oku kunokuba yinto yokugqibela eya kufuna ukuyenza ibaluleke kubo bonke abasebenzisi begama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UApple ufuna uSiri aphendule kuwe ngokwazi ilizwi lakho